Fifandraisana amin'ny politikam-pirenena Reef Resilience
Ireo firenena dia mitady hatrany ny hampihenana ny entona entona entona (GHG) azy ireo ary handray anjara amin'ny fanalefahana ny toetr'andro sy ny fampifanarahana amin'ny alàlan'ny fiarovana sy famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana karbonika manga. Nandritra ny folo taona lasa, nisy ny fandrosoana natao hanohanana ny fampidirana ireo ekôstôlômanenan'ny karbaona manga ho lasa politikam-pirenena sy ambanivohitra. Araka ny fifanarahana tany Paris, ny hetsika fanalefahana sy fanovana dia azo ampidirina ao amin'ny firenena tsirairay avy (NDC).
Ny fanadihadiana ny 163 natolotra ny NDC dia nampiseho fa ny firenena 28 dia ahitana ny referanda ao amin'ny faritra amoron-dranomasina amin'ny resaka fanalefahana ary ny firenena 59 dia ahitana ny tontolo iainana amoron-dranomasina sy ny faritra amoron-dranomasina amin'ny paikady fampifanarahana. ref
Ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovaovan'ny toetr'andro (UNFCCC) dia manana rafitra maromaro ho an'ireo firenena mba hitatitra ny dingana efa novolavolaina sy ny fandrosoana amin'ny adihevitra momba ny fiovan'ny toetr'andro. Ankoatra ny NDC, dia afaka mampiditra ny ecosystem bleu ny firenena ao amin'ny National Adaptation Plans (NAPs), Programa Nasionaly Fampandrosoana (NAPAs), ary ny fihetsika mifanohitra amin'ny firenena (NAMAs).
Fanararaotana NDC fanararaotana - National GHG Inventories
Ny fampivoarana ny politika sy ny valinteny momba ny fitantanana, ary ny hanomezana tarehimarika henjana ao amin'ny kaonty gazy nasionaly sy eran-tany dia tokony ho tafiditra ao amin'ny vondron'ny GHG ofisialy ireo firenena izay manolotra ny UNFCCC. Ny tombontsoa lehibe dia ny fampidirana ireo tanimboto amoron-dranomasina any amin'ny toeram-pitrandrahana karbaona ho an'ny firenena (jereo ny IPCC 2013 Supplement Provisional Wetlands izay manome ny fomba fitantanana GHG ho an'ny tany sy ny faritra amoron-dranomasina ary manohana ny fampidirana ny ala sy ny fandroahana avy amin'ireny ecosystems ao amin'ny vondron'ny GHG) . Amin'ny fampidirana ireo zavamiaina ireo ho fitaovam-pirenena, ny fampihenana ny fiarovana ny tontolo iainana marefo dia hiditra ho fanombanana ny fandrosoana maneran-tany amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny Fifanarahana Paris amin'ny alalan'ny dingana Global Stocktake.
Mangatsiaka any amin'ny alan'ny ala
Ny fikajiana ny ala honko sy ny famerenana amin'ny laoniny dia azo ampidirina ao anatin'ireo rafitra momba ny ala UNFCCC toy ny REDD + sy ho toy ny ampahany amin'ny hetsika LULUCF raha misy firenena mamaritra honko ho ala. Raha ny loharano dia loharano na sidina manan-danja araka ny famaritana ny fanadihadiana momba ny sokajy IPCC, toy ny ala honko, ny karbaon-tany dia hampidirina ao amin'ny metodom-pejin'ny REDD + na LULUCF.
Ny ala honko sy ny famerenana ny ala honko dia azo atao ao anatin'ny tetik'asa REDD +. Sary © Tim Calver
Ny NAMAs (Hetsika fanamafisana ny firenena) dia mety ho an'ireo firenena an-dalam-pandrosoana hitarika tetikasa fanalefahana ny tetikasa izay mifantoka amin'ny tombontsoa ara-tsosialy ihany koa. Ny NAMAs dia ahitana ny ezaka atao amin'ny karbaona marefo amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fiarovana sy ny famerenana amin'ny laoniny any amin'ny tontolo iainana amoron-dranomasina. Noho ny tombontsoa ara-tsosialy maro ateraky ny ala amoron-dranomasina, dia tafiditra tsara ny tontolo voajanahary.
Fanararaotana NDC Opportunities - NAPs / NAPAs
Ny fandaharanasa fampifanarahana eo amin'ny firenena (NAPAs) dia mamolavola drafitra hamaly ireo filàna maika sy mila fanampiana avy amin'ny LDCs izay efa manana traikefa mora indrindra amin'ny fampandrosoana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny National Adaptation Plans (NAPs) dia mamela ny Mpifanaraka mba hamantatra ny filàna fampandrosoana maharitra sy maharitra ary hampivoatra sy hampiharana paikady sy fandaharanasa hamahana ireo filàna ireo. Ireo faritra mandavan'i Coastal dia efa nodinan'ireo Antoko maro ao anatin'ny NAPs / NAPAs.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny karbaona manga amin'ny rafitra UNFCCC hafa, dia jereo ny fizarana 4 of misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEcosystem Blue Carbon Coast: Ny fahafahana hahazo anjara miorina amin'ny firenena.
Dingana ahafahana mampiditra karbaona manga ao misokatra amin'ny varavarankely vaovaofihenan'ny fiovaovan'ny toetr'andromanokatra fisie PDF Ny ezaka dia:
Mivoatra drafitrasa mangaikan'ny mozika nasionaly, mamaritra ny toe-javatra manokana eo amin'ny firenena, ny fahafahana, ny filàna sy ny fetra
Mitondrà fanombanana karbaona ho an'ny firenena sy ny fanombanana ny tontolo iainana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy sy ara-toekarena eo amin'ny tontolo voajanahary manga
Manaova fanadihadiana momba ny tombon-dahiny momba ny tombom-barotra nasionaly, anisan'izany ny hetsika karbonika manga ao amin'ny paikady momba ny fiovaovan'ny toetrandro
Ny tombontsoa iraisan'ny ID momba ny vola sy ny asa mifandraika amin'ny karbaona any amin'ny faritra amorontsiraka
Manangana ny fahafahana ara-teknika, politika ary ny asam-panjakana amin'ny famoahana sy fanadiovana avy amin'ny fantsona karbonika manga sy toeram-ponenana
Manaova hetsika fanentanana iombonana
Ny fanamby amin'izao fotoana izao hampidirana ny tontolo iainana marefo karbaona ao anatin'ny politikam-pirenena dia ahitana ny angon-drakitra tsy misy ny volavolan-dalamby, ny fandefasana entona, ary ny fanesorana, ary ny lohataona amin'izao fotoana izao dia mitoetra ivelan'ny tatitra, ny kaonty, na ny rafitra NDC. ref Na izany aza, ny fanohanana avy amin'ny vondrona toy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBlue Carbon Initiative ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiaraha-miasa iraisam-pirenena ho an'ny Blue Carbon dia manampy amin'ny fampidirana ny tontolo iainana karbônina manga ao amin'ny politika nasionaly.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahatakarana ny fahaiza-manaon'ny Blue Carbon tany Azia afovoany
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEcosystem Blue Carbon Coast: Ny fahafahana hahazo anjara miorina amin'ny firenena
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTari-dalana ho an'ny Tetik'asa Blue Carbonmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCarbon Blue - Inventory ho an'ny famaritana voafaritra nasionalymanokatra fisie PDF